ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာသန်းမြင့်သည် ရန်ကုန်မြို့ရှိ USAID မှ Assistant to the Administrator ဖြစ်သူ Ms. Beth P. Dunford ဦးဆောင်သောကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ | Commerce
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာသန်းမြင့်သည် ရန်ကုန်မြို့ရှိ USAID မှ Assistant to the Administrator ဖြစ်သူ Ms. Beth P. Dunford ဦးဆောင်သောကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
Fri, 03/17/2017 - 09:15 -- adminDep
၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၁၇ ရက်နေ့ ၁၄: ၀၀ နာရီအချိန်တွင် စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာသန်းမြင့်သည် ရန်ကုန်မြို့ရှိ USAID မှ Assistant to the Administrator ဖြစ်သူ Ms. Beth P. Dunford ဦးဆောင်သောကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား ဝန်ကြီးရုံး၊ ဧည့်ခန်းမ (၁) ၌ လက်ခံတွေ့ဆုံ
“(၁၆) ကြိမ်မြောက် တရုတ်-မြန်မာ နယ်စပ်ကုန်သွယ် ရေးကုန်စည်ပြပွဲ (ရွှေလီ) အကြောင်း သိကောင်းစရာ”
အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦးတိုးအောင်မြင့်သည် KM Terminal and Logistics Limited မှ ဒါရိုက်တာဖြစ်သူ ဦးညီထွဋ်အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးအောင်ထူးသည် IGE Groups of Company ၏ Director ဖြစ်သူ ဦးသန့်ဇင် ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦးတိုးအောင်မြင့်သည် (CCIEE) ၏ Chief Economist ဖြစ်သူ Ms. Chen Wenling ဦးဆောင်သည့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးအောင်ထူးသည် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ သီရိလင်္ကာ နိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E. Mr. K. W. N. D. Karunaratne အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးအောင်ထူးသည် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အင်ဒိုနီးရှား နိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E. Prof. Dr. Iza Fadri ဦးဆောင်သည့်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာသန်းမြင့်သည် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဂျပန်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Ichiro MARUYAMA ဦးဆောင်သည့်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာသန်းမြင့်သည် ဂျပန်နိုင်ငံ၊ အအိချိခရိုင်တွင် ခန့်အပ်ထားသည့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဂုဏ်ထူးဆောင်ကောင်စစ်ဝန်ဖြစ်သူ မစ္စတာ တိုရှိအိုနီရှိမူရ ဦးဆောင်သည့်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာသန်းမြင့်သည် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ ယူနန်ပြည်နယ်၊ တဲဟုန်ပြည်နယ်ခွဲ၊ ပါတီကော်မတီအတွင်းရေးမှူး၊ ပြည်ပချစ်ကြည်ရေးအသင်းတာဝန်ခံ Mr. Wang Jun Qiang ဦးဆောင်သည့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ